एक वर्षको भयो 'कवि प्रधानमन्त्री'को कविता
सागर चन्द काठमाडौं, ३१ असार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द्रागिरीमा कविता लेखेको एक वर्ष पुगेछ । मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले गत वर्ष ‘हिमवत खण्ड कला साहित्य सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो । सोही सम्मेलनमा ७ मिनेट समय खर्च गरेर लेखेका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले कविता ।
‘माफ गर्नुहोला प्रधानमन्त्री स्वयंमले कविताको शीर्षक दिएका थिएनन् ।’
सरसर लेख्दा जम्मा दुई शब्द केरेर लेखिएको प्रधानमन्त्रीको स्वप्निल कविता नेपाली काव्य आकाशमा कहाँ पो पर्छ ? कुन कित्तामा पो उभिन्छ ? आँशु कवि शैलीमा लेखिएको यो कविताको शीर्षक प्रधानमन्त्रीले त जुराउन सकेका छैनन । मैले कसरी जुराउनु ?
शनिबारको दिन थियो । बादलले काठमाडौंको आकाश टम्म ढाकिएको थियो । बादलले आकाश छोपे पनि झरीले पखालिएको काठमाडौं उपत्यका चन्द्रागिरी पहाडबाट सुन्दर देखिएको थियो । मोहक देखिएको थियो । कंक्रिटको यो जंगल उचाईबाट हेर्दा लोभलाग्दो नै देखिन्छ !
उपत्यका देखिने डाँडोबाट देश विदेशका कविले चन्द्रागिरीमा प्रधानमन्त्रीलाई कविता सुनाए । काठमाडौं भित्रिने चिसो छेक्ने चन्द्रागिरी पहाडको मौसम चिसो थियो । समृद्धि, सपनामाथि उपमाको भार बोकाउँदै सुनाईएका कविताले माहोल तताएपनि बोटलका बोटल तातोपानी रित्याउँदै प्रधानमन्त्रीले चन्द्रागिरीको चिसोसँग लड्नुपरेको थियो ।
बिहान साढे १० बजे चन्द्रागिरी उक्लेका प्रधानमन्त्री साँझ ६ बजे मात्रै फर्किए । कविता कार्यक्रमको मञ्चमा बसेर दिनभर कविता सुन्दै बेफुर्सदिला बनेका प्रधानमन्त्रीले कविता लञ्च खाने समयमा लेखेका थिए ।
दुनियाँ परिवर्तनशील छ, जिन्दगी बाँचुञ्जेल मात्रै हो, किनभने एकदिन सबैले मर्नुपर्छ भन्ने आशयसहित सुरु भएको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको कविता । जीवनको नश्वरताबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको कवितामा सपनाले प्रवेश पायो ।
स्वप्नद्रष्टा कहलिएका प्रधानमन्त्रीले कवितामा व्यक्त गरेको सपना मोह र नश्वर चिन्तनबीच तालमेल आजसम्म भेटेका छैनन् साहित्य समीक्षकले ।
‘परिवर्तनशील दुनियाँमा सधैं बाँचेको को छ र !
बाँचुन्जेल हो जिन्दगी मर्नु त छंदै छ ।
मरे पनि केही छैन त्यसपछि पनि सपना देख्न पाउँ...’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चन्द्रागिरीबाट मृत्युपछि पनि सपना देख्न पाउँ भन्दै कामना गरिरहेको समयमा डा. गोविन्द केसीको १५ औँ अनशनको १५ औँ दिन चलिरहेको थियो ।
चन्द्रागिरीको उचाईबाट मोहित भएका प्रधानमन्त्रीले ‘चन्द्रागिरीको डाँडामा आएर सपनामा भए पनि भावी सन्तति मुस्कुराएको देख्न पाउँ’ भन्दै काव्य भावमा चुर्लुम्म डुबिरहँदा चाबहिल जोरपाटी सडकका खाल्टो र हिलोमा कति मोटरसाईकल पछारिएका थिए ? कति पैदल यात्रु हिलाम्य भएका थिए ?
स्मरण रहोस ः कविता लेख्नुभन्दा १० दिन अगाडिमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं सडकका खाल्टा र हिलो मैले बनाएको हुँ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले ७ हजार ५ सय फिट उचाईको चन्द्रागीरीबाट मरेपछि पनि सपना देख्ने सपना सुनाईरहँदा कंलकी नागढुगां सडकमा उडेको धुलोले चन्द्रागिरी छोप्नै आँटेको थियो । बर्खा थियो, पानी पर्यो र चन्द्रागिरी धुलोले छोपिन पाएन ।
यथार्थ भन्दा सपनामै रमाउने प्रधानमन्त्री ओलीले कवितामा त्यसै लेखेका होईनन ‘मरे पनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न पाउँ ।’
काठमाडौंको केन्द्रबाट करिब १४ किलोमिटर टाढा रहेको चन्द्रागिरीमा प्रधानमन्त्रीले १३ देशबाट आएका कविका दुई दर्जन बेसी कविता श्रवण गरेपछि भनेका थिए, ‘दिनभर कविता सुनेर मैले आफूलाई चार्ज गरेको छु ।’
प्रधानमन्त्री ज्यू चार्ज सकियो कि बाँकी छ ? सायद प्रधानमन्त्रीको चार्ज सकियो क्यारे ! देशमा कवि पक्राउ पर्नुको कारण प्रधानमन्त्रीको चार्ज सकिएकै कारणले नै होला ?
‘कविता नसुन्ने मानिस त भैँसी जस्तै हो, भैँसीको अगाडि जति गीत गाउनु होस भैँसीले घाँस मात्रै चपाउँछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द्रागिरी मै भनेका थिए । मलाई आश्चर्य लाग्छ : आफैं कविता लेख्ने, कविताको उपासक भन्ने प्रधानमन्त्री ओली बारम्बार कविलाई किन पक्राउ गर्छन् ? सायद, उनी झुक्किन्छन क्यार ! विचारणीय छ : देशमा प्रधानमन्त्री झुक्किनु सामान्य हो । किनभने प्रधानमन्त्री हुने प्रक्रिया नै झुक्किएर हुने प्रक्रियाजस्तो देखिन्छ !
चन्द्रागिरीको कार्यक्रम पूर्ण साहित्यिक थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि साहित्यकै वरीपरी रहेर भाषण गरेका थिए । साहित्यसँग बेला कुबेला जोडिने संयोग जुरेपनि अन्तत प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक प्राणी नै हुन् । (‘प्राणी’ शब्दलाई अन्यथा नलिनुहोला, किनभने ग्रिक दार्शनिक एरिस्टोटल(अरस्तु)ले मान्छेलाई पोलिटिकल एनिमल नै भनेका थिए ।)
त्यसैले कार्यक्रम साहित्यिक भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले चन्द्रागिरीबाट केही राजनीतिक संकेत गरेका थिए । काव्यात्मक शैलीका उपमा प्रयोग गर्दै राजनीतिक भाषा बोलेका थिए ।
‘के बोलेका थिए ?’
‘पर्खनुहोस ! समयले सबै देखाउने छ ।’
अहिलेको लागि प्रधानमन्त्री ओलीको साहित्यिक चर्चा ।
संसदमा प्रदिप गिरिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाह नभएको शास्त्र र जानकारी नभएको विषय कुनै छैन भनेका थिए । कतिपय मान्छेले यसलाई प्रधानमन्त्रीमाथि गरिएको व्यग्यंका रुपमा अथ्र्याए । तर, होईन प्रधानमन्त्री ओली शास्त्र र ज्ञानका चल्ताफिर्ता विकिपिडिया नै हुन् । जसको केही उदाहरण उनले चन्द्रागिरीमै पेश गरेका थिए ।
चन्द्रागिरीमै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालबाट दार्जिलिङ गएका कवि अगमसिहँ गिरीले यात्रामा लेखेको कविता सुनाए–
‘चित्लाङ, मार्कु, भीमफेदी, कुलेखानी गाउँमा
नमस्ते छ भन्दिनु है, बास बसेका ठाउँमा ।’
दार्जिलिङबाट ओली नेपाल फर्किए र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रख्यात रचना ‘कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री’ कविताका केही हरफ पनि सुनाए । ओलीका अनुसार देवकोटाले यात्री कविता चित्लाङमा बिरामी बोकेर गईरहेका मानिसलाई देखेर लेखेका थिए ।
ओलीले देवकोटाको यात्री कविता बाचनमा केही त्रुटि गरेपछि कार्यक्रममा सहभागीले कोरसमा कविता वाचन गरेरे ओलीलाई साथ दिए । खासमा देवकोटा प्रसँग आउँदासाथ ओली झुक्किन्छन् । गत माघमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सवमा पनि ओलीले देवकोटाको खण्डकाव्य मुनामदनलाई नाटक भनेका थिए ।
ओलीको चन्द्रागिरी ज्ञान यतिमै सकिंदैन । र सकिनुपनि हुँदैन । लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ बनाएका अशोकाले पनि चन्द्रागिरीको बाटो हुँदै तिब्बत यात्रा गरेकादेखि महादेवले आफ्नी श्रीमती सतिदेवीको लास बोकेर भौँतारिंदा चन्द्रागिरीमा ललाट अर्थात निधार खसेको प्रसङ्ग समेत ओलीले सुनाए ।
अब पालो महाभारतको । महाभारतको कथा अनुसार यदुवंश नाश हुँदा बचेका केही परिवार चित्लाङमा बस्न आएको पौराणिक रहस्योद्घाटन पनि गरे प्रधानमन्त्री ओलीले । चित्लाङमा रहेका गोपाल थरका मानिस तिनै यदुवंशका सन्तति रहेको समेत उनले बताए ।
महाभारतबाट प्रधानमन्त्री ओली फर्किए केहीसमय पहिलेको नेपालतर्फ । रणबहादुर शाह निर्वासनबाट फर्किदा चन्द्रागिरीको बाटो फर्किएकाले चन्द्रागिरी ऐतिहासिक महत्वको स्थल हो ओलीले भने ।
अब अलिकति प्रधानमन्त्रीले चन्द्रागिरीबाट गरेको राजनीतिक संकेत । प्रधानमन्त्रीद्वारा रचित कविताको भारमा थिचिएको प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संकेत पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएको छ ।
नेपाल एकीकरणका संयोजक पृथ्वीनारायण शाहले चन्द्रागिरीबाट काठमाडौँ खाल्डो देखेर जुँगामा ताउ लगाउँदै काठमाडौंमा राज गर्ने रहर गरेको इतिहास स्मरण गर्दै ओलीले पृथ्विीनारायण शाह र उनका भारदारको अभिनय समेत गरे । शाह र उनका भारदारको अभियन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने –
‘मेरा पेटका कुरा कसरी बुझिलिया ?’ (पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भारदारलाई सोधेको)
‘जुँगामा जसै ताउ लगाया मनका कुरा बुझिलिया ।’ (पृथ्वीनारायणका भारदारले दिएको जवाफ)
भनिन्छ पृथ्वीनारायण शाहले चन्द्रागिरीबाट काठमाडौं देखेपछि उनमा काठमाडौं विजय गर्ने र राज गर्ने मोह पलाएका थियो । र, आफ्नो मोहलाई उनले यथार्थ पनि बनाईछाडे ।
कविता सम्मिलनको मञ्चबाट पृथ्वीनारायण शाहको अभिनय गर्दै जुँगा नभएको आफ्नो ओठमाथि ताउ लगाउने शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीले औँला घुमाउँदा कार्यक्रमस्थल हाँसाले गुञ्जायमान भएको थियो ।
कार्यक्रमस्थलको हाँसो र कविताले छोपिएको थियो प्रधानमन्त्रीको राज गर्ने चाह । शासक बन्ने रहर । शासक बन्ने लोभ । जसरी पृथ्वीनारायण शाहको मनको चाह बुझेका थिए उनका भारदारले त्यसरी नै ओलीको मन÷पेटको कुरा बुझ्दैछन उनका भारदार । र, ओलीकै भाषा र ओलीकै सपना जसरी आफु पनि प्रस्तुत हुन थालेकाछन् ।
जम्मा १० लाईनको कवितामा प्रधामन्त्री ओलीले ४ पटक त सपनामा देख्न पाउँ भन्दै अनुनय गरेकाछन् । र, उनी जिउँदै मात्रै होईन मृत्युपछि पनि सपना देख्न पाउँ भन्दै इच्छा जाहेर गर्दैछन् कवितामार्फत । चन्द्रागिरीको उचाईँले मोहित भएका प्रधानमन्त्री ओली पनि सत्ताको अपरिमित उचाईँमा सपनाको इन्धन हालेर समृद्धिको उडान भर्दै छन् ।
त्यसैले कहिलेकाही डर लाग्छ कतै सपनाको इन्धन सकिने त होईन । कवितामा भनेजस्तै मृत्युपछि पनि ओलीका सपनाले पच्छ्याईरहने हो कि भनेर । त्यसमाथि चन्द्रागिरीबाटै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘चन्द्रागिरीले मान्छेलाई शक्तिशाली हुने महत्वकांक्षा दिन्छ ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३१, २०७६, ११:०२:००